Ma aha Gerrad, ma aha Alonso, ma aha Benitez,hadaba waa kuma? Halyeyga Liverpool ee jirkiisa oo dhan ku wada sawiray Tattoo tiro badan oo uu ku xusayo Champions League-gii ay 2005 ka qaadeen AC Milan? [SAWIRO] – Gool FM
Ma aha Gerrad, ma aha Alonso, ma aha Benitez,hadaba waa kuma? Halyeyga Liverpool ee jirkiisa oo dhan ku wada sawiray Tattoo tiro badan oo uu ku xusayo Champions League-gii ay 2005 ka qaadeen AC Milan? [SAWIRO]
Kaafi June 22, 2016
(Liverpool) 23 Juunyo 2016. Dhowaan laacibka ka fariistay ciyaaraha John Arne Riise, waxa uu mar muujiyey sida uu jaceylka ugu qabo Liverpool isaga oo jirkiisa ku qoray Tattoo oo uu ku xusayey Champions League ay AC Milan 2005 qaadeen ee caanka noqday.
2014 isaga oo wali u ciyaraha Fulham, Riise waxa uu mar kale xusay Champions League-gii 2015 isaga oo garabkiisa ku sawiray Tattoo.
2015, Riise waxa uu mar kale KALIGAA SOCON MAYSID “You ‘ll Never Walk Alone” ku qoray lugtiisa biddix taas oo uu ku sameeyey goolal aad u badan oo Liverpool ah.
Tattoo-ga cusub waxaa ka muuqda koobka Champions League, waqtigii kulanka , magacyada kooxaha – AC Milan iyo Liverpool.
First session done with @daniel__louis 👏🏻Long day tomorrow as well 😀 #tattoos
A photo posted by John Arne Riise (@jariiseofficial) on Jun 22, 2016 at 11:55am PDT
A photo posted by John Arne Riise (@jariiseofficial) on Jun 22, 2016 at 10:09am PDT
Loving the progress 👏🏻✌🏻️ #tattooartist #tattoos @daniel__louis is the man!
A photo posted by John Arne Riise (@jariiseofficial) on Jun 22, 2016 at 8:28am PDT
Now it’s all ready to go!! The brilliant @daniel__louis is on it 👏🏻😊 #tattooartist #tattoos
A photo posted by John Arne Riise (@jariiseofficial) on Jun 22, 2016 at 7:53am PDT
EURO 2016: Group E: Xulka Talaaniga oo kaalinta 1-aad ku soo baxay inkastoo laga adkaaday, Belgium oo kaalinta labaad xiratay iyo Sweden oo waysay kaalinta saddexaad + Sawirro
EURO 2016: Isku aaddka wareegga 16-ka oo dhamaystirmay (Italy v Spain, Croatia v Portugal)